MuSUSE ivo vanoda kuremadza zvisina kujairika mafaera masystem | Linux Vakapindwa muropa
MuSUSE ivo vanoda kuremadza zvisina kujairika mafaira masisitimu
ari Vagadziri veSUSE vakazivisa zvirongwa zvekudzima zvechinyakare kana zvishoma-zvakashandiswa mafaira masisitimu izvo zvinoenderana neLinux kernel nekutadza. Shanduko yakarongwa kuverengerwa mune ramangwana kuburitswa kweSLE 15-SP1 uye OpenSUSE Leap 15.1.
Icho chikonzero chishuwo chekudzivirira sisitimu kubva pakurwiswa kunoitika kunoitwa nekubatanidza midhiya neakagadziridzwa masystem faira anoshandisa kusagadzikana mukuita kwavo.
SUSE ichatsemura huwandu hwenhoroondo faira mafaera uye / kana zvishoma zvinoshandiswa nekukasira muSLES nezvikonzero zvekuchengetedza.
Rondedzero yakatsanangurwa inogona kutariswa pano.
Mubvunzo ikozvino ndewekuti isu tinofanira here kuita zvakafanana kuvhuraSUSE.
Kufungidzira kwangu ndekwekuti kunyangwe irwo runyorwa rwepamusoro rungangodaro rusina kukakavara kune vatengi vebhizinesi, vashandisi veVhuraSUSE vanogona kunge vachipokana nezvimwe zvinhu pane zvakanyorwa.
1 Zvishoma zvakashandiswa mafaira masisitimu anozosarudzwa
1.1 Mamwe mafaera masisitimu ari mukutarisa
Zvishoma zvakashandiswa mafaira masisitimu anozosarudzwa
Ma module pamwe nekuitwa kwe 21 mafaera masystem akanyorwa mazita uye haazoregedze nekutadza paunenge uchibatanidza mota ine dataystem data.
Iko shanduko inongokanganisa otomatiki kurodha mamodule kana akaiswa ne otomatiki kuona kweimwe faira system.
Chero zvazvingaitika, vashandisi vanofanirwa kucherechedza kuti kunyangwe tikaita izvi, unogona kugonesa zvakare masystems aunoda nekungopa mhinduro mumitsara iri muvatema faira.
Mushandisi achiri kugona kukwirisa iyo faira faira uchishandisa iyo mount command, nekutsanangura zvakajeka mhando yeiyo faira system (semuenzaniso, "mount -t jfs"), kana nekukanda module inodiwa (semuenzaniso, "modprobe jfs").
Izvo zvinoonekwa kuti yemafaira mazhinji ekutsigira runyorwa kwenguva yakareba zvinongouya pasi kuti zvienderane nekernel API. Uye kodhi yacho haizombo kuongororwa uye inogona kunge iine hurema hunogona kushandiswa nekubatanidza yakaipa yekunze dhiraivha.
Iyo F2FS faira sisitimu, inoshandiswa mune mbozhanhare mbozha madhiraivha, yainyatso nyorwa FS yakavharirwa nekutadza, kusanganisira iyo Samsung F2FS faira system.
Chikonzero chekunyora pasi F2FS kushomeka kwenzira yekuona iyo faira system vhezheni pane ino faira system, iyo isingavimbise kuchengetedzwa kwekuenderana panguva yekutsigira kuchengetedza chengetedzo.
Parizvino kuumbwa kwerondedzero dema kunotevera:
hfs (hfsplus module autunun yakachengetedzwa)
hpfs (OS / 2)
Mamwe mafaera masisitimu ari mukutarisa
Kunze kweizvi zvakare Zvirongwa zviripo kuwedzera omfs uye ntfs mafaera masystem to the list (ntfs haina kugadzirwa kwenguva yakareba, saka parizvino ntfs-3g inofanira kushandiswa)
Hakusi kuti NTFS haina kushandiswa zvakanyanya; Chete kungotarisa izvo
ntfs kernel module yakaonekwa kubvira 2007.
Kunyangwe iyo pfungwa kubva kukurumidza uye inoshanda maonero ekuona haina kushata, chokwadi ndechekuti Yakatanga kuburitsa hurukuro nekuti inoita kunge isiri zano rakakura mushure mezvose.
Uye zvakataurwa, maererano nemaitiro emuno mafaera, ruzhinji rwevashandisi vanoshandisa:
ext2 / 3/4, xfs, btrfs, uye reiserfs. Ipo OCFS2 uye GFS2 zvakajairika zvakakwana zvekuti haudi kuzvinyora.
Zvimwe zvacho ndezvekuenderana neyakare kana isingawanzo mashandiro masisitimu, eiyo akachena mafirimu midhiya (ndokuti, isina FTL), kana ane zvimwe zvekuchengetedza nyaya (f2fs). Iko kune vashandisi kunze uko kune chero eizvi?
Ndine chokwadi chekuti pane mashoma. Ini handifunge chete kuti zvakakodzera kusiya iyo iyo iyo yakawanda yevashandisi inogona kugadzirisa vashoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » MuSUSE ivo vanoda kuremadza zvisina kujairika mafaira masisitimu